မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ စာရင်း
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:51 AM
These so-called student leaders should be charged at the International Criminal Court with murder cases.
Their refugee status must be cancelled by the host countries because they are not political refuguees but only muderers.
မင်းတို့ပြောတဲ့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘယ်လိုတာဝန်ရှိတာလည်းဆိုတာ တိတိကျကျပြောပါဦး။ ဘာကြောင့်တာဝန်ရှိတာလဲ။
တာဝန်တွေဘာတွေနားမလည်ဘူးးသီဇွန်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာ တကိုယ်ကောင်းသမားဆိုတာတော့ သေသေချာချာသိတယ် ဒီကောင်အခုတလော ၀င်ငွေနည်းနေတယ် ဒီကောင်ကောင်းစားနေတယ် ပြီတော့
ကဲ..သူတို့ က သိက္ခာ ကာကွယ်မယ် ဆိုပါလား..
ကဲ..အစိုးရ နဲ့တပ်မတော် က..ကော..